Miaraka amin'ny Scraper Screen ianao dia afaka miatrika asa sarotra samihafa, ao anatin'izany ny famafazana angona marina, ao anatin'ny telo minitra fotsiny. Io no iray amin'ireo rafitra Java sy tsara indrindra indrindra hatramin'izao. Ny scraper dia tsy azo ampiasaina afa-tsy rehefa manana fahaiza-manao fandaharana tsara sy ampy fahalalana Java, Python, ary C ++. Ankoatra izany, tokony hanana fahalalana fototra momba ny XML sy HTML ianao mba hahazoana tombontsoa avy amin'io sehatra io. Manala fanazavana amin'ny tahirin-kevitra HTML izy io, ary afaka manamarina an'ity serivisy ity amin'ny Citrix na sehatra hafa mitovy amin'izany. Raha vantany vao navoaka sy napetraka, Screen Scraper dia hikarakara asa maromaro mitovy. Azo atao ho an'ny orinasa madinika sy maitso. Ilaina fotsiny ny manana fahaiza-manao koditra fototra hampiasana io rafitra io amin'ny fomba tsara kokoa.